RASMI: Kooxda Manchester United oo ku dhawaaqday saxiixa Alex Telles – Gool FM
RASMI: Kooxda Manchester United oo ku dhawaaqday saxiixa Alex Telles
(Manchester) 05 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay naadiga Porto kala soo wareegay daafaca bidix ee reer Brazil, Alex Telles.
Daafacan garabka bidix ayaa kooxda reer England ee Manchester United ugu soo biiray adduun dhan 13.5 milyan oo gini.
Waxa uu booska garabka bidix kula tartami donaa Luke Shaw oo naaxay ama cayilay, isla markaana ay dhaawacyo hareeyeen xilli ciyaareedyadii dhowaa.
“Manchester United waxaa farxad u ah inay xaqiijiso inay Alex Telles kala soo wareegeen FC Porto, daafacan ayaa saxiixay heshiis afar sanadood ah, waxaana uu qiyaar u haystaa in heshiiskiisa lagu kordhiyo sanad kale oo dheeri ah.” ayaa la soo dhigay bogga rasmiga ah ee kooxda Man Utd.
Telles oo 27 sano jir ah ayaa shantii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay ku sugnaa FC Porto, waxaana uu u dhaliyey 26 gool isagoo u sameeyey 50 caawin, waxaana daafacan uu horyaal ku qaaday Portugal, halka uu sidoo kale ka soo ciyaaray kooxda Galatasaray ee dalka Turkiga.
RASMI: Kooxda Man United oo dhammaystirtay saxiixa Edinson Cavani